Khabiirka Kala Duwan: Muhiimadda Dhibaatada Warbixinta
Spam waa welwel weyn oo saameynaya inta badan dadka isticmaala internetka. Xaaladaha badankooda, khiyaamo weyn ayaa ka dhacda caawinta shaashado waaweyn. Xaaladaha kale, dadku waxay la kulmaan xaalado badan oo naxdin iyo jahwareer ah inta lagu jiro dhacdada weerarka maskaxda.
Ivan Konovalov, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Sare Macaamilka Guulaha Macaamiisha, wuxuu xusuusinayaa in ay aad u muhiim u tahay qof walba in uu si dhakhso ah u soo sheego. Tusaale ahaan, waxaad wici kartaa 0300 123 20400 si aad u soo sheegtid been-abuur ama been-abuur. Warbixinta sheegashada ayaa ka caawisa Waaxda Sirdoonka Qaranka ee baaritaanka iyo sidoo kale tallaabooyin kale oo waxtar leh. Markaad soo sheegto kiis kiiska, waxaad ku caddeyn kartaa tallaabada xigta, kaas oo raaci doona dareenkaaga. Xaaladaha intooda badan, warbixinnadani waxay keenayaan in la soo gudbiyo dacwadaha kiisaska keena baaritaannada. Xaaladaha kale, sheegashooyinkaasi ma keeni karaan baaritaano
Warbixinta kufsiga ee wargeyska Royal
Inta badan kiisaska spam waxay ku dhacaan fududeynta kaysaska. Adeegyada ugu badan ee bixiyeyaasha e-mailka ah waxay leeyihiin meeris kaas oo u oggolaanaya dadka isticmaala in ay calaamado gaar ah u yeeshaan sida spam. Waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo muqaalka anti-spam, gaar ahaan on bixiyaha email sugan. Qofka isticmaala boostada Royal, qof kasta ayaa soo sheegi kara spam iyo kiisaska kale ee la xidhiidha Freepost Scam Mail, PO Box 797, Exeter EX1 9UN. Sidoo kale waa lagama maarmaan si kor loogu qaado wacyiga macaamiishaada. Xusuusnow, nabadgelyada boggaaga iyo waliba booqdayaashaadu waxay ku jiraan gacmahaaga. Xarumaha kale ee emailada ee aad ku soo sheegi kartid xayiraad waxaa ka mid ah 0345 611 3413 iyo sidoo kale scam.mail@royalmail..
Wicitaanada taleefanka ee premium
Xaaladaha qaarkood, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad si toos ah ugu soo gudbiso wicitaan teleefon ah oo kees ah. Xaaladdan, waxaad la xiriiri kartaa Hay'adda Adeegyada Adeegyada Kharashka (PSA). Waxaa muhiim ah in la ogaado in adeeggan uusan ahayn lacag la'aan iyo kharashka ku baxa gudbiyahaaga hadda. Waxaad sidoo kale booqan kartaa bogga PSA si aad u soo sheegto kiisaskan ama xitaa wac lambarka telefoonka ah 0300 303 0020.
Jooji emailka xayaysiinta
Mid ka mid ah tallaabooyinka muhiimka ah ee lagu ogaanayo ogeysiinta spamka waa ka warbixinta. Waxaa jira meelo badan oo aad ka warbixin karto spam. Ugu horreyntii, waa muhiim inaad calaamad u noqoto emayl sida isla markiiba ka dib markaad hesho. Cabbirkan wuxuu fariin u dirayaa bixiyahaaga emailkaaga si uu uqaado fariimo ka timid domainka ama cinwaanka. Tallaabada kale waxay ku lug leedahay qaadashada tallaabooyinka kor ku xusan. Isticmaalayaasha ayaa sidoo kale xakameyn kara qaar ka mid ah kiisaskaas oo ay ku jiraan lambarka booliska oo aad si toos ah ugu soo sheegi kartaan kiisaska spam. Waxaa sidoo kale muhiim ah in kor loo qaado wacyigelinta qaar ka mid ah weerarrada argagixisada, taasoo ka dhigan kartaa shabakada internetka inay hoos u dhacdo.
Waa muhiim in la soo sheego xakamaynta iyo hawlaha internetka ee sharci darada ah. Shakhsiyaad badan ayaa ku dhaca khasaare aad u ballaaran oo ku yimaada boggooda ganacsiga iyada oo loo marayo spam Natiijada, waxaa lagama maarmaan ah in aad naftaada si joogto ah ula socoto siyaabaha hadda jira iyo habka loo xakameyn karo spam. Xaalado kale, waxaad si toos ah ugu wargalin kartaa spam si toos ah masuuliyiinta khuseeya. Qiyaastan waxay dhalin kartaa qaar ka mid ah siyaabaha ugu dhakhsaha badan ee lagu caawiyo xakamaynta xaaladda spam. Qaar ka mid ah meelihii aad u sheegi lahayd spam waxay ku jirtaa tilmaamahan. Waxay muhiim u yihiin oo waxay samayn karaan wadiiqo ammaan ah oo lagu fulinayo hawlaha internetka Source .